2011 Green Card မဲ လျောက်လွှာများ စတင်လက်ခံ : U.N.O.B
Ye | Oct 05, 2009 | Comments 5
2011 Green Card မဲဖေါက်ရန်လျောက်လွှာများလက်ခံနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အကူအညီလိုအပ်ပါက UNOB Contact Email သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၁။ ပင်ကိုမဟုတ်ဘဲ ဖြည့်စွက်ထားသောဓါတ်ပုံများ။ ဥပမာ – နုတ်ခမ်းမွှေး (အတု)၊ မုတ်ဆိတ်မွှေး (အတု)။
၂။ မူရင်းဓါတ်ပုံကို ကျုံ့ထား ဆန့်ထားခြင်း။ ဥပမာ – မူရင်းပုံကို ပိန်ရှည်ပုံဖြစ်အောင်လုပ်ထားခြင်း။
၃။ မျက်နှာစောင်းနေသောပုံ။ (မျက်နှာကို ကင်မရာရှေ့တည့်တည့်မထားခြင်း)
၄။ ကန့်လန့်ဖြတ်ရိုက်ထားသောပုံ။ (ကင်မရာနှင့်ဦးခေါင်းတို့ ပုံမှန်ဒေါင်လိုက်တည့်တည့်မဟုတ်ဘဲ ကင်မရာကိုကန့်လန့်ထား၍ရိုက်ထားခြင်း)
၅။ ဓါတ်ပုံသေးလွန်းနေခြင်း။ (သတ်မှတ်ထားသောအချိုးအစားထက်သေးငယ်နေသောဓါတ်ပုံ)
၆။ ဦးခေါင်းကြီးလွန်းသောဓါတ်ပုံ။ (ဓါတ်ပုံတွင်ဦးခေါင်းပိုင်းကအချိုးအစားမမျှစွာအလွန်အမင်းကြီးနေခြင်း)
၇။ ဓါတ်ပုံနောက်ခံတွင် ပုံရိပ်များ ဒီဇိုင်းများပါနေခြင်း။
(ရှင်းလင်း၍ အရောင်တောက်ပမနေသော ပြောင်နောက်ခံဖြစ်ရပါမည်)
၈။ ရှင်းလင်းသောဓါတ်ပုံမဖြစ်ခြင်း။ (ေ၀၀ါးနေသောဓါတ်ပုံ)
၉။ ဓါတ်ပုံသည်မြင်ကွင်းတခု၏နောက်မှာဖြစ်နေခြင်း။ (ကန့်လန့်ကာ၏နောက်တွင်ရပ်၍ရိုက်ထားသကဲ့သို့)
၁၀။ ထင်ရှားပြတ်သားမှုမရှိခြင်း။ (ဓါတ်ပုံပီပြင်စွာပုံမပေါ်ခြင်း)
၁၄။ အလင်းရောင်ပေးမှုများလွန်း၍ ဓါတ်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းအချို့ အလင်းရောင်အောက်တွင်မထင်ရှားတော့ခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း။
Please click to apply DV2011
2010 Census Form Filling Guide Vide...
သမ္မတ အိုဘားမား ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရေ...
Filed Under: General News • Newsletter
Tags: DV • green card
Organizations are reminded that current registration with the Central Contract Registration at http://www.ccr.gov is required to upload an application through http://www.grants.gov. Registration status may be checked at https://www.bpn.gov/CCRSearch/Search.aspx. Organizations that experience difficulty registering or updating information through CCR are advised to call 866-606-8220 as soon as possible.
The submission deadline for grant applications is 11:59 pm EDT April 1, 2011. Organizations must apply electronically for these funding opportunities using the application package and instructions available at http://www.grants.gov. Foralist of the most frequently asked questions and more information on the FY 2011 Citizenship and Integration Grant Program visit http://www.uscis.gov/grants.
Thanks, Ko Than Naing
FY 2011 Citizenship and Integration Grant Program funding opportunities are now available. Visit http://www.uscis.gov/grants for more information.
All applicants applying for federal funding must haveaDun and Bradstreet Universal Data Numbering System (DUNS) number. ObtainaDUNS Number. In addition to havingaDUNS number, all applicants must register with the Central Contractor Registration for Grantees.
See our Citizenship Resource Center Contact Us page for phone numbers and e-mail addresses.